Nidaamka magangalyada – Asylum – JRS Romania
Nidaamka magangalyada ee carruurta aan lala socon waxay ka koobnaan doontaa dhowr tillaabo, iyo wakiilkaaga sharciga ah iyo NGO-yada ayaa kaa caawin doona inta hawshani socoto.
Fadlan weydiiso talo iyo macluumaad sida ugu dhaqsaha badan! Eeg qaybtayada xiriiriyeyaasha wixii macluumaad ah ee ku saabsan hay’adaha kaa gargaari kara oo akhri qaybaha xiga si aad uga ogaato mid kasta oo ka mid ah tallaabooyinka habraaca magangalyadoon.
Xagee iska diiwaan galiyaa?
Markaad magangalyo weydiisato Romania, waxaa marka hore lagu geyn doonaa Xarunta Gobolka ee ay maamusho Kormeeraha Guud ee Socdaalka (GII oo ingiriis ah ama IGI oo kuyaala Romania). Markaad halkan timaadid, waa inaad isqortaa.
Sidee laygu diiwaangelin karaa?
Waxaad la kulmi doontaa sarkaal ka socda GII / IGI oo ku weydiin doona inaad siiso faahfaahinta shaqsiyeed ee ku saabsan naftaada, sida magaca, wadanka aad ka timid, taariikhda aad dhalatay, diinta, luqada, qowmiyada, safarka.
Xusuusnow inay aad muhiim u tahay inaad sheegto runta ku saabsan da’daada, maadaama carruurta iyo dhallinta aan qaan gaarin loola dhaqmo si ka duwan kan dadka waaweyn. Haddii aad hayso wax dukumentiyo ah oo muujinaya da’daada, la wadaag sarkaalka.
Sidoo kale tarjubaan ayaa joogi kara markaad is diiwaangelineyso. Fadlan sheeg wixii baahiyo ah ee aad lahaan karto si aad u hesho sida ugu dhaqsaha badan ee suurtogalka ah ee kugu habboon.
Sarkaalku wuxuu kaa qaadi doonaa sawirkaaga iyo farahaaga (sawirrada faraha). Tan waxaa laga yaabaa inaysan ahayn markii ugu horreysay ee faraha lagaa qaado, sababtoo ah hey’ado kala duwan ayaa leh hanaan kala duwan. Waa muhiim inaadan isku deyin inaad ka cararto Romania. Haddii aad uga tagto Roomaania inaad magangalyo ka dalbato wadan kale oo quseeya Xeerka Dublin, waxaa lagu aqoonsan doonaa iyadoo lagu saleynayo farahaan waxaana dib laguugu celin karaa Romania.
Miyaan helayaa dukumintiga aqoonsiga?
Haa, waxaad heli doontaa dukumenti aqoonsi kumeel gaar ah oo cadeynaya inaad magangalyo-doon ka tahay Romania. Fadlan ogow oo u qaado meel walba aad tagaysid.
Maadaama aad tahay cunug safraya waalid la’aan, GII / IGI waxay la xiriireysaa hay’ad takhasus u leh oo loo yaqaan Badbaadinta Caruurta, oo ku siin doonta “wakiil sharci”.
Waa maxay wareysiga horudhaca ahi?
Tallaabada xigta ka dib marka aad iska diiwaangeliso waa wareysiga horudhaca ah, sidoo kale u aqaan sida su’aalo weydiin ama wareysi gaaban. Waxaa lagugu wargalin doonaa taariikhda wareysigan gaagaaban ka hor. Caadi ahaan waxay dhacdaa maalmo kadib markii gobolka uu ku siin doono wakiil sharci. Qofkaan ayaa kula imaan doona wareysiga.
Maxaa lay weydiin doonaa?
Ujeedada wareysiga gaaban waa in hey’ada magangalyada ay hesho faahfaahin dheeraad ah oo adiga kugu saabsan (magacaaga, da’daada, xubnaha qoyskaaga iyo halka ay joogaan, sida aad uga soo safartay wadankaagii hooyo ee ku tagtay Romania, hadaad magangalyo ka dalbatay wadamada kale. ). Tani waa fursad wanaagsan oo lagu soo bandhigo dukumiinti kasta oo aad u aragto inay quseyso waxayna ka caawin kartaa mas’uuliyiinta inay go’aan ka gaaraan dalabkaaga magangalyo. Sidaa darteed aad ayey muhiim u tahay in qofku daacad noqdo oo runta sheego.
Sidoo kale waa muhiim inaad u sheegto sarkaalka haddii aad qoys ku leedahay Yurub. Macluumaadkaani wuxuu ka caawin doonaa go’aan ka gaarista in aad dib ula midoobi karto qoyskaaga iyadoo la raacayo waxa loogu yeero Xeerka Dublin. Hoos guji si aad wax badan uga ogaato Habka Dublin.
Ayaa ka qeyb galaya wareysiga horudhaca ah?
Wareysiga horudhaca ah waxaa lagu buuxin doonaa jiritaanka sarkaal ka tirsan hay’adda laanta socdaalka, tarjume, iyo wakiilkaaga sharciga ah.
Waa maxay Habka Dublin?
In kasta oo aad magangalyo waydisay Romania, waxay noqon kartaa in wadan kale uu masuul ka yahay eegista dacwadaada. Tani waxay ku saleysan tahay qawaaniin loo yaqaan “Dublin Regulation”, kuwaas oo go’aamiya waddanka u fiirsanaya kiiskaaga.
Maxaa dhacaya haddii aan cararo?
Haddii aad marka hore magangalyo ka dalbato Romania ka dibna u cararto wadan kale si aad u dalbato magangalyo halkaas, waxay u badan tahay in laguugu celiyo Romania. Waqtigaan aad maqantahay, waxaad lumin doontaa waqti qaali ah waxayna sidoo kale saameyn ku yeelan kartaa dalabkaaga magangalyo.
Habka Dublin ma igu caawin karaa dib ula midowga qoyskayga?
U sheeg mas’uuliyiinta sida ugu dhakhsaha badan haddii qof ka socda qoyskaaga (hooyo, aabe, walaashaa, walaalkaa, eedadaa / eedadaa, awoowe / ayeeyada) uu si sharci ah ugu joogo waddan kale oo ka tirsan midowga Yurub. Waxay kaa caawin karaan inaad aado iyaga ama waxay kugu caawiyaan inay kuu yimaadaan. Waa inaad tustaa dukumiinti kasta oo aad haysato oo cadeyn u ah inay qoyskaaga yihiin. Laakiin xusuusnow! Kormeeraha Guud ee Socdaalka ayaa kaa caawin kara oo keliya haddii aad u sheegto dhammaan faahfaahintaan sida ugu dhakhsaha badan ee suuragalka ah iyo ka hor inta aysan go’aan ka gaarin kiiskaaga magangalyo.
Diiwaangelinta waxaa lagu siin doonaa macluumaad oo ay la socdaan faahfaahin ku saabsan nidaamka Dublin. Fadlan si taxaddar leh u aqri oo weydii wakiilkaaga sharciga, hey’adda magangalyada ama NGO wixii macluumaad dheeraad ah.
Xogwaraysiga kadib, waxaa lagugu casuumi doonaa wareysi lala yeelanayo sarkaal takhasus leh oo ka socda kormeerka guud ee laanta socdaalka, caadiyan maalmo kadib. Waxaa lagugu wargalin doonaa taariikhda saxda ah ee horay loo sii sheegay. Wareysiga waa talaabada ugu muhiimsan nidaamka magan galyada waana inaad kahadasho sababaha aad uga carartay.
Ayaa ka qeyb galaya wareysiga?
Wakiilka sharciga ayaa kula joogaya wareysiga. Qof kale ayaa waliba joogi kara hadaad rabto. Tusaale ahaan, wakiil ah oo ka socda xarunta aad ku kalsoontahay, ama hal wakiil oo ah UNHCR. U sheeg sarkaalka hore haddii aad rabto qof kale inuu goob joog ka noqdo wareysiga.
Sidoo kale turjubaan ayaa joogi doona meesha si uu kuugu turjumo wada hadalada u dhexeeya adiga iyo sarkaalka. Waad la hadli kartaa turjubaan kahor wareysiga si aad u ogaatid inaad isfahmi kartaan. Ha ka baqin ama ha ka xishoon inaad u sheegtid sarkaalka haddii aadan la xiriiri karin tarjumaanka, aadan fahmin isaga / iyada, ama aadan ku qanacsaneyn isaga / iyada.
Sidee ayuu wareysiga u shaqeeyaa?
Sarkaalku wuxuu ku weydiin doonaa inaad si faahfaahsan u sharaxdo sababta aad uga soo carartay waddankaagii hooyo iyo waxa dhici doona haddii aad halkaas ku noqon lahayd. Waa inaad sheegtaa inta ugu badan ee aad ka sheegi karto waxa kugu dhacay iyo khataraha aad ka baqeyso.
Way adkaan kartaa in laga hadlo khibradaha qaarkood, laakiin fadlan isku day. Aad ayey muhiim u tahay in aad run sheegto oo aad runta sheegto. Ha ka baqin inaad tiraahdid “Ma aqaan”, haddii aadan jawaab garanaynin. Ma jiraan jawaabo sax ama khalad ah doodan.
Mudo intee leeg ayuu noqon doonaa wareysiga?
Wareysiga wuxuu socon karaa dhowr saacadood, iyadoo kuxiran kiis kasta. Hadaad jeceshahay inaad nasasho qaadato, ha ka baqin ama ha ka xishoon inaad u sheegto sarkaalka.
Jawaabahaygu ma lagu qori doonaa qoraal?
Sarkaalku wuxuu qori doonaa dhammaan su’aalaha iyo dhammaan jawaabaha iyo faahfaahinta aad bixiso. Wareysiga waxaa lagu hayn doonaa qarsoodi mana jiro qof jooga dalkaaga oo ogaan doona waxaad tidhi.
Dhamaadka wareysiga, turjubaanka ayaa kuu turjumi doona dhammaan wixii uu sarkaalku qoray. Si taxaddar leh u dhageyso hana ka cabsan inaad sarkaalka weydiiso inuu saxo wixii khaladaad ah. Wax walba waa in loo qoraa sidaad sheegtay. Waxaad ku saxeexi doontaa qoraalka bog kasta ka dib markii uu sarkaalku dib u habeeyo oo tarjumaanku uu caddeeyo dib u eegista.
Tallabada 4: Go’aan
Waraysiga kadib, Kormeeraha Guud ee Socdaalka (GII) ayaa go’aan ka gaari doona haddii aad magangelyo heshay iyo in kale. Waxaad go’aankan ku heli doontaa qoraal.
Goorma ayaan go’aan helayaa?
Guud ahaan, waa inaad go’aanka ku hesho 2-3 bilood laga bilaabo waqtiga aad codsatay magangalyada. Mararka qaarkooda, waxay qaadan kartaa waqti dheer (tusaale ahaan wareysiga ayaa ahaa in dib loo dhigo ama waxaa kale oo lagaa qaaday waraysi labaad si aad u kala caddeyso faahfaahinta qaar). Fadlan samir oo ha ka baqin haddii ay sii dheeraato. Sidoo kale waa muhiim inaad ku sii joogto Romania inta lagu gudo jiro howsha magangalyada oo dhan.
Sidee ayaan ku heli karaa go’aanka?
Kormeeraha Guud ee Socdaalka ayaa adiga iyo wakiilkaaga sharci u sheegi doona go’aanka, luqad aad fahanto. Si kastaba ha noqotee, dukumiintiga ayaa ku jiri doona luqadda Romania. Qareenkaaga ama la-taliye aan dowli ahayn wuxuu kaloo la xiriiri karaa adiga iyo wakiilka sharciga, sidoo kale wuu sharixi karaa waxa kujira dukumintiga. Go’aanka waxaa sidoo kale loo sheegi karaa qareenkaaga ama hay’adda samafalka ah ee ku caawisay intii lagu gudajiray nidaamkaaga magangalyada, laakiin waa inaad tan weydiisataa kahor.
Go’aanku muxuu oran doonaa?
Go’aanku wuxuu noqon karaa “haa” ama “maya”, oo macnaheedu yahay
Haa: Waxaa laguu aqoonsaday “qaxooti”; AMA
Haa: Waxaa lagu siinayaa magangelyo hoosaad; AMA
Maya: Codsigaaga magangalyo waa la diiday waadna ka caban kartaa go’aankan.
Waxaad waydiin kartaa wakiilkaaga sharci ama ururada aan dawliga ahayn macnaha jawaabta aad heshay. Aad qaybta “Fahmitaanka go’aanka” si aad wax badan uga ogaato go’aan kasta.
Kayar 18 jir oo aan lahayn waalidiintaada
Haddii aad ka yar tahay da'da 18 sano oo aad keligaa safarto, waalid la'aanteed, macluumaadkani si gaar ah ayuu kuu khuseeyaa